गत साता सम्पन्न नेपाल मिसेज टुरिजम सौन्दर्य प्रतियोगितामा ३१ जनालाई पछि पार्दै फर्माकोलोजिस्ट डा आना आचार्यले उपाधि जितिन्। काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा फर्माकोलोजीकी लेक्चरर उनले बेष्ट स्किनसहित मिसेस टुरिजम २०१८ को उपाधि जितेकी हुन्।
पेशाले डाक्टर भए पनि उनलाई मोडलिङ क्षेत्रमा रहर थियो। धेरै समय पढाइकै कारण आफ्नो सपना पूरा गर्न असमर्थ रहेको बताउँछिन् उनी। ‘जब मिसेस टुरिजमको 23 फेसबुकमा देखेँ मोडलिङ गर्ने सपना पूरा गर्ने रहर पलायो,’ उनले भनिन्, ‘मिसेस टुरिजममा आवेदन दिएँ र टाइटल समेत जितेँ। धेरै खुसी लागेको छ।’
आनाले ९ देखि १२ कक्षासम्मको अध्ययन भारतको केरेलाबाट पूरा गरिन्। सन् २०१२ मा नेपाल फर्किएकी उनको लगत्तै विवाह भयो। उनकी ३ वर्षकी छोरी पनि छिन्।
सन् २०१६ मा फर्माकोलोजीमा एमडी गरेकी डा आनाले त्यही सालदेखि पढाउन सुरु गरिन्। आफ्नो परिवार मेडिकल फिल्डमा भएकाले आफूले पनि मेडिकल शिक्षा नै हासिल गरेको उनी बताउँछिन्। बिहेपछि पनि अध्ययन र अन्य क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताजो जश उनी श्रीमान् र परिवारलाई दिन चाहन्छिन्।
डा आनासँग स्वास्थ्य र मोडलिङका विषयमा स्वास्थ्यखबरका लागि सिर्जना खत्रीले गरेको छोटो कुराकानीः
मिसेस टुरिजममा कसरी भाग लिन आइपुग्नुभयो?
मोडलिङ गर्ने सानैदेखिको रहर पनि पूरा हुने र नेपालको टुरिजमलाई प्रतिनिधित्व गर्न मिल्ने भएकाले मैले आवेदन दिएकी हुँ।
कुन पेशा सजिलो लाग्यो चिकित्सा कि मोडलिङ?
दुुवै गाह्रो छ, दुवैलाई मिहिनेत चाहिन्छ।
मन पर्ने मोडल?
उशा खड्की र माल्भिका सुब्बा।
मन पर्ने डाक्टर?
मेरा सिनियर सबैजना पन पर्छ।
अब मोडलिङ तिरको करिकय कसरी अगाडि बढ्छ?
रहर छ, हेरौं के हुन्छ।
मेडिकल फिल्ड छोडेर मोडलिङमा जम्ने चाहना हो?
होइन। मेडिकल मेरो पेशा हो भने मोडलिङ रहर हो।
एक महिनासम्म कामलाई र प्रतियोगितालाई कसरी मिलाउनु भयो?
दुवैतर्फ उत्तिकै ध्यान दिन एकदमै गाह्रो होला भन्ने लागेको थियो। तर, परिवार, साथीहरु र काम गर्ने ठाउँबाट धेरै सहयोग पाएँ। त्यसैले समय व्यवस्थापन गर्न सहज भयो।
यस्ता सुन्दरी प्रतियोगितालाई कसरी लिनु हुन्छ?
सबै मान्छेले आफूमा भएको प्रतिभा देखाउन पाउनुपर्छ। अवसरको कदर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मान्छे भनेको ‘भर्सटाइल’ हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। आफूभित्र भएको प्रतिभा बाहिर ल्याउनुपर्छ। तर, हाम्रो समाजमा शौन्दर्य प्रतियोगितालाई उति साह्रो राम्रो मानिदैन। बिस्तारै यस्ता प्रतियोगितामा पनि सबै क्षेत्रबाट प्रतियोगीहरु आउने हो भने त्यो धारणा परिवर्तन गर्न सहज हुने थियो। यो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने माध्यम हो, यस्ता प्रतियोगिताले मानिसलाई निडर र आत्मविश्वासी बनाउँछ भन्ने सोच आओस् भन्ने चाहन्छु।